La socodsiin Qaabka Waxbarashada Dugsiga Sare | Updates
La socodsiin Qaabka Waxbarashada Dugsiga Sare
Sidaan ku balan qaaday fariintaydii Feb. 17, waxaan u soo qorayaa inaan idinla socodsiiyo qorshaheena inaan dhammaan ardayda dugsiga sare dib ugu soo celino waxbarshadii iskuulka oo buuxda. Macluumaadka fariintan ku qorani ma khuseeyo ardayda Akadeemiyada waxbarashada Durugsan.
Kulankii gudiga waxbarashada ee Feb. 23, waxaan soo bandhigay qorshe dib loogu soo celinayo ardayda dugsiga sare waxbarashadii iskuulka laga bilaabo Talaadada, April 6.
Ardayda ku jira fasalada 6-12 waxay ku soo laabanayaan waxbarashada iskuulka Isniinta ilaa Khamiista, waxayna ka qaybgeli doonaan hawlaha waxbarashada guriga Jimce kasta.
Si loogu hogaansamo amarkii gudoomiyaha gobolka iyo Akadeemiyadii Waxbarashada Durugsan oo buuxda awgeed aan qaadan karin arday kale, waxaan u ogolaanaynaa ardayda ku jira fasalada 6-12 ee aan rabin inay ku soo laabtaan waxbarashada iskuulka ee afarta maalmood ah inay ka qaybgalaan waxbarashada durugsan ee iskuulkooda ay ku qoran yihiin.
Fekradaha muhimka ah ee qorshaha hoos baan idinkula wadaagi doonaa; waxaan rabaa inaan xoojiyo in qorshahani u baahan yahay waqti ku filan si loo hirgeliyo waqtiga badan ee wabarista iyo shaqada hawlgalada ay qaadanayso si loo gaaro ujeedadeena bedqab ku soo laabashada ardayda iyo shaqaalaha.
Waxyaabaha ku soo laabashada dugsiga sare fududayn kara
Marka lagu daro waxyaabaha hoos ku qoran, istiraajiiyado badan oo lagu yaraynayo, sida, weji dabool, dabagal isu dhowaansho, hawlaha joogtada ah ee hawo qaadashada, hab maamuuska gacmo dhiqista, ayaa si fiican uga dhisan nidaamkeena.
Heerka kiisaska fayraska ee degmada iyo bulshada aageena way ka soo raayeen.
Usbuucii hore, gobolku wuxuu bixiyey talooyin cusub oo la xiriira waxbarshada iskuulka ee ardayda dugsiga sare. (Dhawr usbuu ka horna, gobolku wuxuu wax ka bedelay talooyinka ardayda yaryar, kuwaasoo ku soo laabtay waxbarashadii iskuulka bishan horaanteedii.)
Baarista candhuufta ee shaqaalaha ayaa hada laga heli karaa iskuulkasta, shaqaalahana waxaa lagula talinayaa inay sidoo kale ka faa’iidaystaan arintan bulshadu keentay.
Ku dhowaad 1,000 shaqaaleheena ah ayaa ugu yaraan la siiyey talaalkii koowaad, waxaana filaynaa tiro kale oo badan in la talaali doono ugu dambayn April 6.
Maxay tahay sababta aan loo siinayn shan beri oo waxbarasho iskuul ah ardayda fasalada 6-12?
Waaxda waxbarashada ee Minnesota waxay u baahan tahay in iskuulada degmooyinku siiyaan waqti diyaar garow dheeri ah macalimiinta dhiga waxbarashada iskuulka iyo ta fog ba. Maadaama Akadeemiyadeena Waxbarshada Durugsan ay buuxdo oo ayna qaadan karin arday kale, macalimiinta dugsiga sare ee iskuuladeena waxay waxbarayaan ardayda iskuulka jooga iyo kuwa guriga ka dhiganayaba. Sidaa darteed waqti dheeraad ah baa loo baahanayaa. Waxaan isla shaqaynaynaa degmooyinka kale, oo ay ku jiraan deriskeena Anoka-Hennepin, Elk River and Wayzata, isku darista waqtiga diyaarinta maalinta dheeriga ah oo ka dhigno hal maalin (Jimcaha), taas oo ardaydu guriga wax ku baranayaan halka macalimiintuna isu diyaarinayaan usbuuca soo socda.
Sababta April 6 looga dhigay (maa hore loo bilaabo)?
Hogaamiyeyaasheena iskuuladu waxay u baahan yihiin waqti ay ku samaystaan qarsheyaal u gaara oo ku salaysan ta waxaanu looyinka cusub ee gobolka. Waxaanu samayn doonaa waxa ugu fiican ee aan samayn karno si aan ugu hogaansano talooyinka cusub ee ee gobolka laakiin waxaan rabaa inaan cadeeyo inayna suurto gal ahayn in 3 ilaa lixt ft oo kala fogaansho ah laysu jirsado maalintii oo dhan dugsiyada sare. Dhisme kastaa wuxuu samaysan doonaa qorsheyaal caawinaya kala fogaanshaha iyo dhaqdhaqaaq ku filan sida ugu macquulsan.
Gaadiidka, adeegyada cuntada, adeegyada dhismeyaasha waxay ku shaqayn doonaan iyadoo la marayo habab adag oo dhinacyo badan leh aagaga kala duwan
Shaqaaleheena dhismayaasha ka shaqeeya waxay dib ugu celin doonaan alaabta fasalada mudo dhawr beri ah inta ardaydu maqan yihiin. Tani suurtogal maaha inta ardaydu ku jiraan qaabka isku-dhafka ah; fasaxa gu’ga wuxuu siinayaa waqti ku haboon in dhismayaasha alaabta la geeyo inta ardaydu maqan yihiin.
Gobolku wuxuu u baahan yahay inaanu u astayno laba casho oo aan iskuul jirin oo macalimiinta dugsiga sare ugu diyaar garoobaan waxbarashada iskuulka, waxaan u gartay March 26 iyo April 5. Ardayda dugsiyada sare waxay ku soo laaban doonaan April 6.
Ku soo laabashada waxbarashada iskuulka ma noqon doonto “mid caadiya”
Inta aan qorshaynayno waxbarashada iskuulka ee buuxda ee fasalada oo dhan (marka laga reebo Akadeemiyada Waxbarashada Durugsan), ma ku soo laaban doono iskuulka sidii ay ahayd ka hor March. Amarka gudoomiyaha gobolka, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira isu soo baxa waaweyn sida xafladaha ciyaaraha, weli way qabanayaan iskuulada. Hawlgaladeena iskuulka maalinlaha ah ooy ku jiraan sida ardaydu u dhexmarayaan dhismayaasha, habka nadaafada, weji daboolka iyo kuwo kale, waxay na tusayaan xaqiiqada xanuunka. Maalin uun, noloshu “caadi” bay ku noqon doontaa, laakiin ilaa markaa, yaraynta xanuunka ee iskuuladeena ayaan sii wadaynaa.
Waxaan hada gudagelaynaa faahfaahinta fulinta. Waxaan ognahay in dedaal aad u badan loo baahan doono si loo hirgeliyo isbedelka, waxaanuna isku deyi doonaan inaan ugu qabano sida ugu fiican ardaydeena, shaqaalaha, iyo qoysaskeena.